धरापमा पाकिस्तानको अर्थतन्त्रः सर्वसाधारणलाई चिया कम पिउन भनियो! « Dainik Online
धरापमा पाकिस्तानको अर्थतन्त्रः सर्वसाधारणलाई चिया कम पिउन भनियो!
प्रकाशित मिति : १ असार २०७९, बुधबार १२ : १३
इस्लामाबाद । पाकिस्तान आर्थिक विपत्तिउन्मुख अवस्थामा छ । सरकारलाई देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउने भन्ने कुनै ठोस तरिका थाहा छैन्।
पाकिस्तानमा कतिसम्म आर्थिक संकट छ भन्ने कुरा त्यहाँकै एक संघीय मन्त्रीको भनाईबाट पनि पुष्टि हुन्छ । किनकी देशको अर्थतन्त्र जोगाउन भन्दै एक जिम्मेवार मन्त्रीले चिया कटौती गर्न सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेका छन्।
चिया कम पिउन मन्त्रीले दिएको सुझाव अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । भारतमा जस्तै पाकिस्तानमा पनि चिया पारखीको ठूलो जनसंख्या छ । पाकिस्तान अहिले ठूलो विपत्तिको किनारमा छ । आतंकवाद र राजनीतिक संकटसँगै देश गम्भीर आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ।
पाकिस्तानको नयाँ सरकारले आगामी तीन वर्षमा ६ दशमलब ४ अर्ब डलर ऋण चुक्ता गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले तोकेको बेलआउट मापदण्ड पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
अमेरिकी स्वार्थ बमोजिम सरकार गठन भएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानले केही सातादेखि निरन्तर सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । संसदमा अविश्वसको प्रस्तावपछि उनले राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। एजेन्सी